Hymn 40 - Nziyo.com
Catholic Shona Hymn 40
Baba VaMambo Yesu Ngavarumbidzwe - Fr J. Dandiro Hwata
M· SIA Baba vaMambo Yesu, ngavarumbidzwe, vaimbirwe
V SIA Mwari-ri ngavatunhidzwe- Baba vaMambo wedu Yesu Kristo ngavarumbidzwee- Mwari vakudzwe- vakatikomborera- isu vanyakubatana naYesu -nokutipa makomborero - makomborer o, ezvomweya anobva kudenga .
B Baba vaMambo- Baba vaMambo wedu Yesu Kristo Tenzi vaimbirwe -Mwari vakudzwe- vakatikomborera i-su vanyakubatana naYesu nokutipa makomborero amakomborero makomborero, makomborero ezvomweya, anobva kudenga .
1.Tenzi akatisarudza pasi pasati pavapo nokuda kwetsitsi dzake dzakanyanya.
2.Iye akada kuti isu tive vana vake, vasina chakaipa chose.
3. Iri izano rake kuti tizogamuchirwa muumambo hwake.
4. Izvi ndizvo zvaakati zvichazosakiswa naKristo .
5. Mwari ngaasvinudze maziso emweya yedu tione kutendeka kwake kunesu .
6.Mwari ngaakudzwe arumbidzwe - Baba vaMambo wedu -rini -narini .
7.Mwari akatinatsa tose kuti mbiri yorudo rwake izadze pasi pose.
SIA Mwari akatisarudza kuti tive vagari venhaka yedenga- akatikomborera - akada kuti tive vana vake nokuda kwaKristo -zita rake rirumbidzwe - akatida ngatimutunhidze -timupe mbiri.
B Mwari akatisarudza ku-ti tive vagari venhaka yedenga akatikomborera akada kuti, tive vana vake nokuda kwaKristo -rikudzwe -Tenzi wenyasha ngatimutunhidze timupe mbiri.
Hymn 39Hymn 41